Somaliland oo Waxbarasho lacag la’àana siinaysa Naafada iyo Danyarta | Salaan Media
Home Wararka Somaliland oo Waxbarasho lacag la’àana siinaysa Naafada iyo Danyarta
Somaliland oo Waxbarasho lacag la’àana siinaysa Naafada iyo Danyarta
Hargeysa (SM)- Xukuumadda Somaliland, ayaa ku dhawaaqday war farax’galiyay dadka aan la xaadkoodu dhammeyn ee baahiyaha gaarka ah qabba, iyo kuwa hayntooda dhaqaale hooseyso ee danyarta.
Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland ayaa wareegto ku soo saartay in lacag la’aan laga dhigayo waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Sidoo kale waxa wareegtadan lagu xusay in dadka adeeg’bixintooda waxbarasho ay bilaashka tahay ay ku jiraan dadka danyarta ahi.
Haddaba waxaana lagu wargeliyay dhammaanba guddoomiyayaasha waxbarashada ee gobollada dalka, in ay ka fuliyaan goobaha waxbarashada gaarka ah iyo kuwa bulshada labadaba, adeegbixinta waxbarasho ee bilaashka, looguna talo galay in wax lagu baro dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa danyarta ah.
Wareegtada ka soo baday Wasaaradda Waxbarashada, ayaa u dhigneyd sidan.
Waxaanay u dhignayd sidan.“Sida uu waajibinayo go’aankii ka soo baxay kal fadhigii 53aad ee golaha wasiiradda, soona baxday sooyaalku marku ahaa 23/1/2020 ee uu shir’guddoominayay madaxweynaha Qaranka JSL, waxa la idin faraa inaad hubisan waxbarasho lacag la’aan ah helaan dhammaan ardayda baahiyaha gaarka ah qaba.
Sidoo kale waxa waajib ah inay goobaha waxbarasho ay deeq waxbarasho siiyaan, ardayda danyarta, iyada dugsiyadda bulshadda (Dawladda), ay waajib ku tahay inay waxbarasho lacag la’aan ah siiyaan ugu yaraan 10% ardayda halka kuwa gaarka loo leeyahay ay ku waajib tahay ugu yaraan 5% ardayda dugsiga dhigata”